BBQ Chicken New Opening at Junction Square Secret Garden 1112 views
ကိုရီးယားမှာ No.1 Chicken Restaurant ဖြစ်တဲ့ BBQ Premium Cafe (BBQ Chicken) ရဲ့ ၄ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲလေးကို ရောက်ပြီးကြပြီလား ??? Junction Square (Secret Garden) မှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဒီဆိုင်ခွဲလေးမှာ အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံကြရအောင်လေနော်။ ဪ၊ BBQ Premium Cafe ရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေရောသိကြပြီးပြီလား?
၁) စားသုံးသူကျန်းမာရေးအတွက် ရှေးရှု ပြီး သံလွင်ဆီစစ်စစ်ကိုသာ အသုံးပြု ခြင်း။
၂) တခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲ ကြက်ကြော်ကို အရသာမျိုးစုံ၊ စတိုင်မျိုးစုံ၊ အရသာချို၊ ချဉ်၊ အစပ် အမျိုးစုံတို့ဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ခြင်း။
၃) ပြီးတော့ ကြက်ကြော်အပါအဝင် အစားအသောက်တွေကို BBQ ရဲ့ Great Taste Eat Fresh ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း မှာမှသာ ချက်ချင်းကြော်တာကြောင့် အချိန်စောင့်ဆိုင်းရသော်လည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်ခြင်း။
၄) ဆိုင်မှာ ရောက်လာတဲ့ Customer တွေကို Extra Service အနေနဲ့ ရေအေးနဲ့ အဆာပြေ Snack ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
၅) အခြား Quality အကောင်းစား အနောက်တိုင်းစာတွေဖြစ်တဲ့ Fried Chicken, Grilled Chicken, Rice Menus, Pasta, Pizza, Burger, Sandwich, High End Coffee တို့ကိုလည်း အရသာရှိရှိ မှာယူနိုင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရသာအရမ်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ သံလွင်ဆီစစ်စစ်ကိုသာ အသုံးပြုထားတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့အတူ Best of the Best Quality ဆိုတဲ့အတိုင်း အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ ကြိုဆိုလျှက်ပါ...
နေရာ - Junction Square (Secret Garden)
ဖုန်း - 09250386128, 09-79-6172238